Taambuugga Taambuugga Shiinaha 2/4 Qof Teendhada Qoyska Laba Lakabka Lakabka Dibadda teendhada iyo soosaarayaasha | Sicilis
Taambuugga Taambuugga 2/4 Qof Teendhooyin Qoys ah Oo Teendhada Bannaanka ah ee Labada Lakab ah
Midabka Badeecada: Liinta / Cagaarka / Buluug
Cabir: Teendho bannaanka ah 240 * 210 * 135cm + Teendho gudaha ah 230 * 200 * 125cm oo loogu talagalay dadka waaweyn ee 3-4 ah
Waxyaabaha: 170T dhalooyin lacag ah + 210D dhar Oxford
Neefsasho iyo Xasilooni:2 Albaabo waaweyn oo sitaabal laba jibaar leh leh ayaa bixiya hawo aad u fiican. Ku qalabeysan 8 khafiif ah oo loo yaqaan 'Alloy Pegs' iyo 4 Xadhko Guy ah, teendhada ayaa leh iska caabin dabayl badan. Ammaan badan.
Ilaalinta wareega oo dhan:170T qalin plaster wax iyo 210D Oxford Ground Sheet siiyaan 2000mm biyo iska caabin ah iyo UV iska caabin ah. Albaabada ku qalabeysan yihiin jiinyeerrada SBS ee tayada sare leh si adag ayaa loo xiri karaa, kuwaas oo bixiya iska caabin adag oo xagga cimilada ah.
Si fudud loo dejiyo:Farshaxanka degdegga ah ee degdegga ah wuxuu kaa dhigayaa inaad teendho ka samaysato gudaha 1 daqiiqo gudahood. Si fudud kor ugu qaad dusha teendhada, hoos u muuji farsamada sare ka dibna dhagsii isku-xidhka hoose meel. Fudud oo waqtigaaga badbaadi.
Isdhaafsi badan:Waxaa ku jira teendho gudaha ah & teendho dibedda ah. kaas oo si gooni ah loo isticmaali karo. Teendhada gudaheeda waxay ka hortagi kartaa duulaanka kaneecada iyo cayayaanka, halka teendhada dibedda ay noqon karto mid hoos u dhigaysa oo xannibaysa falaadhaha UV. Isticmaalka isku dhafan ayaa laba jibaari kara biyaha oo wuxuu heli karaa saameyn roobaadka ka wanaagsan
MAXAAD KA HELI KARTAA WAQTIGEENA?
Haddii aad tahay qof xiiseynaya safarka dibedda, waa inaad u baahato teendho is haysta oo si fudud dib loogu buuxin karo oo si fudud loo qaadi karo. Sidoo kale teendhada waa in laga ilaaliyaa qoyaanka, dabaysha iyo roobka. Si aad si xor ah ugu safri kartid banaanka adiga oo aan roob la kulmin.
Haddii aad tahay qof dhammeystiran, markaa xaqiiqdii waxaad dooneysaa inaad yeelato teendho waasac ah oo qaadi kara qoyskaaga oo ay ku jiraan gacaliyahaaga, adiga iyo 1-2 carruur ah, si aad u sameysatid teendho oo aad ugu raaxeysatid faa'iidooyinka teendhada marka aad dibedda ku ciyaarayso, oo si buuxda ugu raaxee farxadda qoyska.
Haddii aad tahay isticmaale jacayl, markaa hubaal waxaad rabtaa inaad awood u yeelatid inaad si deg deg ah u sameysid teendho jacayl wakhti kasta, meel kasta oo aad la joogto gacaliyahaaga bannaanka. Markaad baxdo, isla markiiba waad hoos u degi kartaa teendhada, adoo badbaadinaya waqtigaaga hawlgalka. Markaas waxaad si buuxda ugu raaxeysan kartaa farxadda jacaylka.
Haddii aad tahay isticmaale jecel xisbi asxaabta, markaa hubaal waxaad dooneysaa teendho wax qabad badan leh. Hal teendho ayaa noqon karta mid hadh leh, halkaas oo aad kula sheekaysan karto asxaabtaada. Iyo mid kale oo lagu nasto Hooska lagu seexdo markaad daasho, Markaad isticmaaleyso teendhadayada, shuruudahan si wanaagsan ayaa loo qabtay. Teendhooyinkeennu waxay isticmaalaan dhar PED khaas ah PU 3000, oo leh saameyn aan fiicnayn oo biyuhu ka soo baxaan oo ka soo baxa qoyaanka. Meesha gudaha ee teendhada waa waasac. Iyo naqshad otomaatig ah oo otomaatig ah oo otomaatig ah ayaa la ansixiyaa, taas oo la dejin karo isla markaana si dhakhso leh u qaadi karta. waxaa si fudud loogu ridi karaa boorso is haysta. Teendhadani waxay diiradda saareysaa ilaalinta asturnaanta. Ka dib markii la xiro marada gaashaanka, bannaanka hore ee teendhada lagama arki karo banaanka. Waxaad si xor ah ugu raaxeysan kartaa guriga gaarka loo leeyahay.
Hore: 2/4 Qofka Oo Soobaxaya Taambuugga Kaambeyn Qoys Teendhada La Qaadan Karo Oo Degdeg Ah
Xiga: Taambuugga Taambuugga 5/7 Teendhada Qoyska Qofka Labaad Lakab Dibedda ah
Teendhada Saqafka adag ee Shell
Teendhada Bannaanka Bannaanka
Teendhada Paw Patrol
Teendhada sariirta saqafka
22pcs Kaamamka Kumbuyuutarka Kaamamka Lagu Sameeyo Laalaadda ...
Taambuugga teendhada PET Teendhada Tubbada Degdegga ah
Balanbaalis Balanbaalis badbaadi kaamamka magnesium flin ...
100pcs Xerooyinka Xerooyinka Xerooyinka Xirfadleyda ...
Taambuugga teendhada 2/4 Qof teendhadiisa Qoyska Dibadda wat ...
Teendhada Dibadda ee Joogtada ah, Bilowga Dabka Magnesium, Taambuugga la buufin karo, Teendhada dusha sare ee Xtm, Qalabka Badbaadinta Degdegga ah, Bilowga Dabka Bilowga,